Uyenza njani kwaye uyaziqonda njani iiNjini ezirhuqayo- Ikkaro
yokuqalisa >> Motors >> Iinjini ezothusayo
Kweli candelo siza kungena kwifayile ye- iinjini ezivuselelayo, inkcazo, uhlobo lweenjini ezixhokonxayo kunye nemizekelo yokwakha kunye nokusetyenziswa.
Senze nje icandelo ngaphakathi kweenjini ze iinjini ezivuselelayo. Sibeka ulwazi kwibhlog, njengoluhlu lweekhonkco kunye nezixhobo ngolwazi oluthe kratya malunga nolu hlobo motores, ke ndicinga ukuba kufanelekile ukucacisa ukuba kutheni ndibabona benomdla ...
El ukuvuselela yinjinjini, ethe yavela njengenye indlela yokuzama umatshini womphunga. Ifuna kuphela umthombo wobushushu ukuze isebenze kwaye izivuno ezifumanekayo zilungile kakhulu. Ngokwethiyori kuphela kwayo enakho ukufumana ukusebenza kweCarnot kunye nokusebenza kunye nesantya esisezantsi, bathi isondele kakhulu. Ukusebenza kweCarnot yeyona nto iphambili kwiinjini zokufudumeza.
Iqonga leSola yeAlmería Yakha izixhobo ezinkulu zokuguqula ukuhamba kweemoto kumandla ombane, kugxila kumandla elanga kwindawo yokufumana ibhalbhu eshushu yemoto.
Kulungiselelwe nina esele nicinga ngaweumthombo omtsha we-locomotion ndikuxelele ukuba nangona ine ukusebenza kakuhle su amandla athile Incinci, ngokungafaniyo nezinye iinjini zangaphakathi zomlilo ezisetyenziswa ezimotweni.
Kodwa eyona nto indonwabise kakhulu kukubona iimodeli ezincinci ezisebenza kuphela ngobushushu obunikwe ngumzimba womntu. Okanye ikomityi yekofu.
Ndikushiya iividiyo ezivela kwi-youtube kwaye ubone ukuba siza kusebenza na ukwakha enye yabancinci.
Ukudityaniswa kwamakhonkco anomdla malunga injini evuselelayo.
Injini yeSirling kwiWikipedia. Ungeniso lweWikipedia olunikezelwe Imoto ehleliyo, incasa yam iyonqena kancinci. Ngokuqinisekileyo kukho abantu abanokuyiphucula kakhulu.
Ukude kunye ne-Eurodish. Iprojekthi enkulu yokuguqula amandla elanga abe ngamandla asetyenziswayo iinjini ezivuselelayo.
Iprojekthi yomsebenzi wokugqibela. Ngenxa ye injini evuselelayo. Ulwazi olunomdla kunye nezixhobo ziyafumaneka.
Itekhnoloji engasasebenziyo. Inkcazo entle kakhulu malunga iinjini ezivuselelayo
Injini eyothusayo. Ukudityaniswa okukhulu kwamakhonkco esiNgesi.
Injini eziDibeneyo. Olunye udibaniso olubalulekileyo lwamakhonkco esiNgesi, ilusizi ukuba lonke olu lwazi aluninzi ngesiSpanish.
Ukuba uyazi eminye imithombo yolwazi, ungathandabuzi ukushiya uluvo kwaye siza kongeza ikhonkco.
Isantya sokuhambisa imoto
Kancinci kancinci kwaye inqaku ngenqaku siyakwandisa ikona yethu encinci malunga iinjini ezivuselelayo.
Ngeli xesha sifumene inqaku elinolwakhiwo olunzulu lwenjini ye-Stirling LTD kwimakezine (ikhonkco lophukile) ngethamsanqa sigcina umxholo. Le injini yi-LTD, okuthetha ukuba yenzelwe ukusebenza ngokwahlulahlula ubushushu obuncinci.
Sinesikhokelo esipheleleyo kwiinjini ze-Stirling, ukuba ufuna ukungena kweli hlabathi linomdla kunomdla kakhulu ukuba ufunda kancinci ngembali yayo, kutheni isebenza, yeyiphi imijikelezo yazo, iindidi ezikhoyo njl.
Ukwakhiwa kwe-injini eshukumisayo.
Ngumatshini apho kufuneka ube nobunkunkqele ekwakhiweni kwawo. Akukho nto inzima ukuyivelisa kwakhona, kodwa ukuba silumkile siya kufumana ukusebenza okungamanzi ngakumbi.
Njengoko ubona emfanekisweni, luhlobo lwenjini
Uyakha njani i-Stirling injini
Emva kokuqala ukubhloga malunga umatshini wokuhambisa, Umlingani wethu, uJorge Rebolledo usithumelele umbono ogqabhukileyo wolwakhiwo lomatshini awenze ukuba ukhuthazwe yividiyo efumaneka kwi-youtube.
Ngenxa yokuba inkulu kakhulu, sizahlulahlula ulwakhiwo lomatshini kumanqaku amathathu.
Nantsi eya eyokuqala.
Umatshini otshisayo Ukuhlaziywa nguJorge Rebolledo